Hanavao ny Apple ID Settings amin'ny iPhone? Ity ny dikan'izany & ny zavatra tokony hatao - Iphone
ny iphone 6 plus tsy mamaly
ahoana no hamohanao ny iphone-nao raha milaza hoe mifandray amin'ny iTunes?
fanavaozana ny tilikambo sela finday iphone
maninona ny telefaoniko no milaza fa tsy misy anohana azy ireo rehefa mampandoa vola
Hanavao ny Apple ID Settings amin'ny iPhone? Ny dikan'izany sy ny tokony hatao!
Ny iPhone-nao dia milaza hoe 'havaozy ny fikirana ID an'ny Apple' ary tianao hialana ilay fampandrenesana. Na inona na inona ataonao, dia toa tsy ho azonao ilay mena sy boribory '1' hanjavona. Hanampy anao aho havaozy ny fikirana ID an'ny Apple ao amin'ny iPhone anao ary asehoy anao ny fomba fanamboarana ny olana raha tsy hiala io hafatra io .
Fa maninona ny iPhone no miteny hoe 'manavao ny toe-javatra Apple ID'?
Ny iPhone-nao dia milaza hoe 'havaozy ny fikirana ID an'ny Apple' satria tsy maintsy miditra ao amin'ny Apple ID ianao vao hampiasa serivisy kaonty sasany. Ny fanavaozana ny fikirana ID an'ny Apple dia ahafahanao mampiasa ireo serivisy ireo. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, midika fotsiny izany fa tsy maintsy averinao ao amin'ny iPhone ny teny miafinao Apple!
Inona no hatao rehefa milaza hoe 'havaozy ny fikirana ID an'ny Apple' amin'ny iPhone-nao
Sokafy ny fampiharana Settings ary paompy Hanavao ny Apple ID Settings . Avy eo, tap hanohy amin'ny efijery manaraka. Ampidiro ny tenimiafinao Apple ID rehefa miseho eo amin'ny efijery ny pop-up.
maninona no tsy mandeha ny finday wifi amin'ny findaiko
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny fampandrenesana 'Update Apple ID Settings' dia hiala rehefa avy nampiditra ny tenimiafinao Apple ID ianao. Na izany aza, amin'ny tranga tsy fahita firy, tsy ho foana ny fampandrenesana, ary mety hahazo pop-up milaza aza ianao fa nisy lesoka nitranga. Mamaky hatrany mba hianaranao ny fanamboarana io olana io!
Tafahitsoka ve ny 'Fanavaozana ny fikirana ID Apple'?
Mampalahelo fa mety nahita an'ity lahatsoratra ity ianao satria ny hafatra Hanavao ny Apple ID Settings dia mikatona amin'ny taona 2020. Raha miraikitra amin'ny iPhone-nao ity hafatra fampandrenesana pesky ity dia angamba satria tsy azo hamarinina ny ID Apple anao. Minoa ahy - tsy ianao irery no miatrika an'io olana io!
Mpikambana marobe ao amin'ny iPhone manampy vondrona Facebook nasongadinay io olana io, ka izay no antony nanirianay hanoratra ity lahatsoratra ity ho anao. Araho ny dingana etsy ambany hamaritana sy amboary ny tena antony tsy hahafoana ny fampandrenesana Fampahalalana Apple ID Settings!
Hamarino tsara fa sonia amin'ny ID Apple marina ianao
Mety tsy ho voamarina ny Apple ID anao satria miditra amin'ny kaonty Apple ID hafa ianao ary noho izany dia miditra ny teny miafinao diso. Sokafy ny fampiharana Setting ary kitiho ny anaranao eo an-tampon'ny efijery hahazoana antoka fa niditra an-tsokosoko ao amin'ny Apple ID marina ianao. Ho hitanao ny Apple ID izay idiranao eo akaikin'ny afovoan'ny efijery.
lasa mavo ny efijery iphone-ko
Zahao ny lahatsoratray raha mila fanampiana ianao manova ny Apple ID !
Mivoaha ary miverena amin'ny ID Apple anao
Raha miditra amin'ny Apple ID marina ianao dia manandrama misoratra anarana ary miverena miditra aminy. Miverena any amin'ny Settings -> Apple ID ary hikorisa hatramin'ny farany Hivoaka . Ampidiro ny tenimiafinao Apple ID ary kitiho Vonoy .
Manaraka, tap Hivoaka eo amin'ny zorony ankavanana ambony amin'ny efijery. Raha te hitahiry kopian'ny Apple News na toerana misy anao ianao dia alefaso ny switch eo ankavanan'ny endri-javatra eo ambaniny Tazomy ny kopian'ny iray. Hamafiso ny fanapaha-kevitrao amin'ny alàlan'ny fanoratana Hivoaka rehefa miseho ny pop-up.
tsy mahita iphone amin'ny iTunes
Izao dia efa nisoratra anarana ianao, tap Midira amin'ny iPhone-nao eo an-tampon'ny fampiharana fampiharana. Ampidiro ny mailaka sy tenimiafinao Apple ID, avy eo paompy Hiditra eo amin'ny zorony ankavanana ambony amin'ny efijery mba hiditra ao amin'ny iCloud. Raha asaina mampitambatra ny angonao amin'ny iCloud ianao, dia mamporisika anao hipaoka an-tsokosoko aho, hahazoana antoka fa tsy hahavery vaovao manan-danja ianao.
Miarahaba anao - tafiditra amin'ny iCloud indray ianao! Raha ny fanavaozana ny fikirakirana Apple ID dia Na izany aza miseho, mandroso amin'ny dingana farany.
Zahao ireo Serivisy iCloud
Azo inoana fa nikatona io fampandrenesana io satria ny serivisy iCloud dia nalemy vetivety noho ny fikolokoloana mahazatra na ny fanavaozana ny rafitra. Rehefa mitranga izany dia mety hosakanana tsy hiditra ao amin'ny Apple ID ianao ho fisorohana loza. Ianao dia afaka jereo ny satan'ny rafitra Apple ao amin'ny tranonkalany!
facebook messenger tsy miasa iphone
Fikirana ID an'ny Apple: Mandrak'andro!
Ny fikirakirana ID an'ny Apple anao dia havaozina ary efa lasa izao ny fampandrenesana manelingelina. Amin'ny manaraka dia milaza hoe Update Update Apple ID Settings amin'ny iPhoneo, ho fantatrao tsara izay hatao! Raha manana fanontaniana hafa momba ny Apple ID ianao dia aza misalasala mamela hevitra etsy ambany.